Dowlada Somaliya oo Soo Bandhigtay 15-Qodob o Lagu Sugi Karo Amaanka Muqdisho (Akhriso) | Allbanaadirtimes.com – Somali News Update
Hay’adaha Amniga iyagoo ka duulaya go’aamadii Golaha Wasiirada ee 11kii May 2017 waxey diyaariyeen barnaamijyadii ay ka mid ahaayeen:
b. Kuwa wata warqad fasax dhaq-dhaqaaq ah.
6. Sidoo kale Ciidanku waxey diyaariyeen qorshihii looga mamnuucayey dhammaan qof kasta oo ay ku jiraan Mas’uuliyiinta Dowladda in Magaalada Muqdisho ay ku dhex wataan ilaalo ka badan 4 askari gaari kasto iyo ugu badnaan 2 gaari, Mana qaadan karaan qori ka wayn AK 47.
12. Maamulka Gobolka Banaadar ayaa ka howlgalaya Abaabulka &amp; Baraarujinta dadweynaha iyagoo kaashanaya Wasaarada Warfaafinta, bulshada qaybaheeda kala duwan, iyo Hay’adaha amniga.
15. Laga bilaabo 11/May/2017 waxaa mas’uuliyiinta Dowladda ee haysta Hubka, Gaadiidka &amp; Ciidanka XDS, laga doonayaa inay ku celiyaan Taliska Ciidanka XDS muddo 10 casho gudohood.